गर्भावस्था को समयमा क्याल्सियम D3 Nycomed
गर्भावस्था को समयमा क्याल्सियम लागि आवश्यक छैन आंका गर्न सकिन्छ। उहाँले मानिसहरूलाई आवश्यक म्याक्रो तत्व हो। उहाँले कंकाल र दाँत को हड्डी को संरचना लागि जिम्मेवार छ। क्याल्सियम पनि रगत clotting र मांसपेशी संकोचन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। शरीर मा यो तत्व को कमी गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ। यो क्षय र हड्डी fragility सुधार र मानव शरीर, भंग, र विभिन्न गर्न सक्छ जो मृदुकरण विरूपण को प्रकार।
क्याल्सियम मा धनी खाद्य पदार्थ सूचीमा, मुख्यतया दूध र चीज हो। अजवाइन, लसुन र बन्दागोभी पनि ठूलो परिमाणमा यसलाई समावेश गर्दछ। यो पनि साग, नट, किसमिस, माछा र अन्य समुद्री मा उपस्थित छ।
गर्भावस्था को समयमा क्याल्सियम सामान्य भन्दा अलि बढी लिन आवश्यक छ। यसको कमी नकारात्मक भविष्यमा भ्रूण विकास र बढ्छ, rickets जस्ता रोगहरु को बच्चा को जोखिम असर गर्छ। ऐंठन, संयुक्त दुखाइ, निदाउरोपनको, बाल हानि, कब्जियत: क्याल्सियम कमी यस्तो लक्षण मा प्रकट भएको छ। कुनै पनि कारण लागि यो पोषण गर्न असम्भव छ भने, यो तत्व युक्त चिकित्सा लागूपदार्थ यसलाई पूरक गर्न आवश्यक छ।
क्याल्सियम D3 Nycomed गर्भावस्था को समयमा contraindicated छैन। तर, जबकि दबाइ लिएर धेरै ध्यान दिएर हुनुपर्छ। यस दबाइ क्याल्सियम र भिटामिन D3 को शरीर मा अभाव जोगिन, osteoporosis, भंग को रोकथाम र उपचारका लागि प्रयोग हुनुपर्छ, र, बाहेक क्रममा।
लिइरहेको क्याल्सियम D3 Nycomed गर्भावस्था को समयमा, छेउमा प्रभाव बारे मा भूल छैन। यी जठरांत्रिय पर्चा को अवरोध समावेश गर्नुहोस्। कि त खुराक कम वा लागूपदार्थ पूरै लिएर रोक्न रगत वा मूत्र को विश्लेषण को वितरण क्याल्सियम को उच्च स्तर पत्ता भने, यो आवश्यक छ।
गर्भावस्था को समयमा क्याल्सियम लिएर पनि औषधिको खुराक तपाईं ध्यान हुनेछ जो मा मुख्य बिन्दु हुनुपर्छ। एक गर्भवती महिला को शरीर मा यो तत्व को धेरै खराब परिणाम निम्त्याउँछ। विशेष मा, जन्म नहर पास गर्न गाह्रो बनाउन भ्रूण टाउको को छाप हड्डी।
रिसेप्शन समयमा दबाइ क्याल्सियम को गर्भावस्था को समयमा D3 Nycomed, तपाईं पनि यो मात्र होइन पाटी, तर पनि अन्य स्रोतबाट शरीर प्रवेश कि सम्झना गर्नुपर्छ। क्याल्सियम को दैनिक खुराक 1500 मिलीग्राम जीव छ, यो कुनै पनि मामला मा भन्दा बढी हुन सक्दैन। यी डाटा आधारित, तपाईं दबाइ को आवश्यक रकम टिप्न गर्न आवश्यक छ।
को दवादारू chewable ट्याब्लेटको को रूप मा discharged छ। यी प्रत्येकले क्याल्सियम र एक तेस्रो समावेश भिटामिन D3 दैनिक आदर्श को।
यो उत्पादन aspartame समावेश गर्छ, त्यसैले यो phenylketonuria संग विरामीहरु मा contraindicated छ। लिदा अन्य दबाइहरु रगतमा क्याल्सियम को मात्रा नियन्त्रण गर्न भूल छैन। साथै, यो दबाइ गर्न contraindications हो: क्याल्सियम पत्थर को गठन, मृगौला विफलता, भिटामिन डी को एक अधिमात्रा
को विषाक्त प्रभाव सम्म दबाइ को एक अधिमात्रा प्रति दिन दुई भन्दा बढी सय ट्याब्लेटको को ग्रहण पछि मात्र सम्भव छ। anorexia, उल्टी, वाकवाकी, चक्कर आना र सामान्य कमजोरी - निम्न hypercalcemia लक्षण। तिनीहरूलाई छुटकारा प्राप्त गर्न, तपाईंले ठूलो रकम मा शरीर मा पानी प्रविष्ट गर्नुहोस् र आहार bezkaltsievoy वा यसको सीमित सामग्री संग रहन पर्छ। अधिमात्रा को कुनै पनि लक्षण छन् भने, तपाईं तुरुन्त चिकित्सा सहायता खोज्नुपर्छ।
तपाईं गर्भावस्था बेला दबाइ क्याल्सियम D3 Nycomed लिएर सुरु गर्नु अघि, उहाँले एक पर्याप्त खुराक नियुक्त गर्नुभएको छ भनेर चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् गर्न imperative छ।
दोस्रो trimester, 15 सप्ताह गर्भवती
गर्भावस्था परीक्षण को संवेदनशीलता। चयन गर्न एक गर्भावस्था परीक्षण के हो
कसरी गर्भावस्था को पहिलो हप्तामा व्यवहार गर्न। गर्भावस्था को पहिलो हप्तामा छैन के गर्न
म गर्भावस्था को समयमा एक धूपघडी भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ?
कसरी गर्भावस्था को समयमा retrochorial hematoma गर्छ
लक्षण Vasta: कारण र लक्षण
धातु उत्पादन लागि विधिहरू। मिश्र को प्रकार। क्षारियधातु को तयारी
सबैभन्दा सहज होटल। Dolzhanskaya थुक्नु: समुद्र द्वारा एक अविस्मरणीय छुट्टी
Dyspepsia: यो के हो र कसरी यो परिभाषित गर्ने?
उल्लू Pygmy: जीवन शैली। घरमा Pygmy उल्लू
को दन्त्यकथा, मिथक र संस्कार मा जंगली violets
भाषाविज्ञान के हो? बस जटिल बारेमा
"Ikarus 256": प्राविधिक विनिर्देशों, इन्धन खपत र फोटो
औषधि 'कार्डिकेट'। निर्देशन, अनुप्रयोग
बच्चाहरु र वयस्क लागि संग्रहालय मा आचरणको नियम
मन - यो के हो? शब्द को अर्थ "मन"
म बप्तिस्मा बालिका हुन के गर्नुपर्छ? हामी सिक्न!